လူ Archives - Alin-U-Yin
Views from another perspective
All Posts in "လူ"
လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တွေ အဘယ်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ကို မထုတ်လွှတ် why don’t human beings and animals produce oxygen? အစာအာဟာရနှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးသော လုပ်ငန်းသည်…
by Nyan Alinn — November 22, 2017 in ပညာရေး 0
ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းအာရုံများကို ဝိညာဉ်က ဦးစီးကွပ်ကဲခြင်း
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အရ အရှင်မြတ်က ဖန်ဆင်းခံတိုင်းအား အရည်အသွေးကိုယ်စီ ချီးမြှင့်ပေးထားပါတယ်။ ကောင်းကင်တမန်များနှင့် မြေပထ၀ီတွင်ရှိသမျှ အရာအားလုံးသည် ကြည်ဖြူလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်မြို့မနှစ်မြို့လျက်နှင့်ဖြစ်စေ အရှင်မြတ်၏အမိန့်တော် ကိုပင် နာခံလိုက်နာနေကြသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည်အရှင်မြတ်ထံတော်ကိုပင်…
by Nyan Alinn — July 13, 2017 in အတွေးအမြင် 0
ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီရှိနေကြသော အရာအားလုံး၏နောက်ကွယ်မှ အရှင်တစ်ပါး
သတ္တဝါတွေက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုထုတ်ပေးပြီး အပင်များက အောက်စီဂျင်ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ အကယ်၍ ထိုသို့ အပြန်အလှန်ထုတ်လုပ်မှုများသာမရှိခဲ့ရင် သတ္တဝါအားလုံးဖြစ်စေ၊ သဘာဝပေါက်ပင်များဖြစ်စေ အောက်စီဂျင်အားလုံးကိုသော်လည်းကောင်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အားလုံးကိုသော်လည်းကောင်း အသီးသီး သုံး ပစ်ကြပြီး…
by Nyan Alinn — July 7, 2017 in အတွေးအမြင် 0
မထင်မှတ်သော ခန်းဆီးစနောက်ကွယ်က ကောင်းချီး မင်္ဂလာတစ်ပါး (ဒေါက်တာသက်ဝင်း(မိုးစွေ)/ဆေးပညာကဏ္ဍ)
လူကို အန္တရာယ်ကျရောက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ပါးစပ်(သို့)နှာခေါင်းမှတစ်ဆင့် အော့အန်တဲ့နည်း (vomiting)နဲ့ ထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် အဲဒီ အစားအသောက်တွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို လျှော့ချလိုက်နိုင်ပါတယ်။ အော့အန်ခြင်းဆိုတာ ဦးခေါင်းတွင်း…
by Nyan Alinn — July 7, 2017 in ပညာရေး 0
စကြဝဠာကြီး၏ အကွယ်မှကျေးဇူးတော်များနှင့် ဖန်ဆင်းရှင်
အရာရာတိုင်းရဲ့တည်ရှိမှုတွင် ၎င်းတို့ရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်းကို နားလည်နိုင်ရန် ၎င်းတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို သုံးသပ်ကြပါစို့။ ဖန်ဆင်းခံတွေမှာတွေ့ရတဲ့ ရိုးစင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို စူး စမ်းလေ့လာပြီး သဟဇာတဖြစ်မှုနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေမှုတို့ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကြည့်ကြပါစို့။ ပညာရှင်…
by Nyan Alinn — July 6, 2017 in အတွေးအမြင် 0
သဘာဝနိယာမတရားနဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့် အရာရာတိုင်းဖြစ်တည်လာတယ်လို့မြင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ငြင်းခုံခြင်းဆွေးနွေးခြင်းဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် အရာရာတိုင်း အလိုအလျှောက်တည်ရှိခြင်း၊ သဘာဝ အရဖြစ်တည်ခြင်းလို့ ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ တချို့က ဒါကိုထာဝရအမှန်တရားကဲ့သို့ မှတ်ယူကြတယ်။…
by Nyan Alinn — July 5, 2017 in အတွေးအမြင် 0
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၅)
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၄)
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၃)
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၂)
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၁)
Most Likes Posts
March 24, 2018 5
လူသားမျိုးနွယ်စုအား ရိုသေလေးစားခြင်း – ၂ (သူရထွန်း) (Respect For Humankind)
March 12, 2018 2
March 29, 2018 2
လူသားမျိုးနွယ်စုအား ရိုသေလေးစားခြင်း – ၁ (သူရထွန်း) (Respect For Humankind)
March 10, 2018 1
ပညာရေးအားဖြင့်သာ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မည်
ဆရာကြီးဖသ်ဟွလ္လာဂူလန်ဆိုသူကား အဘယ်သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ပေနည်း
Alinn-U-Yin BEDİÜZZAMAN SAID NURSI Fethullah Gulen Fethullah Gulen Heartstring Google Gulen's Movement Heartstrings by Fethullah Gulen Hizmet Movement Irfan Yilmaz Love Love and Tolerance Love isaVerb Love of God Thomas Micheal Thomas Michel Tolerance Youtube ကလေး ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာ (အပိုင်း-၁) ခန္ဓာကိုယ် ဂူလန်ကျောင်း စအီးဒ် နူရ်ဆီ သခင်ကြီး၏ ပေးစာများ (ပထမ ပေးစာ) စကြဝဠာ ဆရာကြီးဖသ်ဟွလ္လာဂူလန် ဆဲလ် တူရကီ ပညာရေး ဖန်ဆင်းရှင် ဖသ်ဟွလ္လာဟ်ဂူလန် မိခင် မိဘ မွတ်စလင် လူ လူသား ဝိညာဉ် သဘာဝ သိပ္ပံ အပင် အရှင်မြတ်၏မေတ္တာ (အပိုင်း-၁) အလ္လာဟ် အတွေးအမြင် ကျောင်းသား ဆေးသိပ္ပံ ဒေါက်တာသက်ဝင်း(မိုးစွေ) ရေ
သံလွင်ဆီ၏ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများ (မေ/လူမှုဘဝ)
သံလွင်ဆီ၏ ထူးခြားသော လက္ခဏာများ (မေ/လူမှုဘဝ)
အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဦးနှောက်၏ အကျိုးထိရောက်မှု (နိုင်မင်းနိုင်/သိပ္ပံ)
Archives Select Month September 2019 (3) August 2019 (12) July 2019 (13) June 2019 (7) May 2019 (2) March 2019 (2) February 2019 (6) January 2019 (7) December 2018 (11) November 2018 (9) October 2018 (6) September 2018 (15) August 2018 (15) July 2018 (6) June 2018 (6) May 2018 (9) April 2018 (13) March 2018 (18) February 2018 (9) January 2018 (14) December 2017 (11) November 2017 (13) October 2017 (20) September 2017 (24) August 2017 (26) July 2017 (33) June 2017 (37) May 2017 (24)
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos ipsum. Read More→
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၅) September 18, 2019
ဆရာကြီးဖသ်ဟွလ္လာဂူလန်ဆိုသူကား အဘယ်သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ပေနည်း May 21, 2017
ဂူလန်နှင့် သင်ကြားရေးစနစ် May 21, 2017
ပညာရေးတိုးတက်မှ နိုင်ငံတိုးတက်မည် May 21, 2017
ဟေ့မောင်မောင် ဒို့ကမင်းရဲ့ “နှာခေါင်း” ပေါ့.. – ၁ (ဒေါက်တာသက်ဝင်း/ကြည့်၊တွေး၊ယုံ) June 23, 2018
စအီးဒ် နူရ်ဆီ သခင်ကြီး၏ ပေးစာများ (ပထမ ပေးစာ) September 12, 2018
မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတတ်သူ November 10, 2017
လူ့အရေပြားရဲ့ အံ့ဘနန်းလုပ်ဆောင်ချက်များ (၆) (ဒေါက်တာသက်ဝင်း(မိုးစွေ)/ဆေးသိပ္ပံကဏ္ဍ) September 27, 2017
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၄) September 17, 2019
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၃) September 7, 2019
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၂) August 30, 2019
မဟာကရုဏာတော်ရှင်ထံ အသနားခံခြင်း (အပိုင်း-၁) August 29, 2019
© 2017 Alinn-U-Yi. All Rights Reserved. Customized By Alinn-U-Yi Team